PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Iziduko saziyekiswa ngumona wabaNtsundu
Iziduko saziyekiswa ngumona wabaNtsundu
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - IZIMVO -
NDITHI mandilenze elabadala elithi umntu xa ethetha unikwa indlebe. Xa ndisenjenjalo ke ndizama ukuphendula umthandi nomfundi wephephandaba I’solezwe lesiXhosa obebhale esithi, ‘Uphi uMnu uMakuliwe?’.
Eliyinyaniso leli, lo mntu kuthiwa nguMakuliwe usaphila, ephila nje usawabhalela onke amaphephandaba aqhele ukukhupha kuwo amanqaku xa kukho imfuneko yoko, kuquka neli silibize ngasentla. Kwaye usavela nakoonomathotholo aqhele ukuvela kubo. Qha, into esingasabhali ngayo, nesingasaveli ngayo ngoku ngumba weziduko, ngenxa yeziphazamiso ezininzi.
Umba weziduko awukho phantsi kwezandla zam, uphantsi kwenkampani ezimeleyo nekuyiyo ehlawulela iindleko zokuphanda, ukuqokelela ndawonye nokuhlalutya iziduko. Iinjongo zayo eziphambili ibikukuqokelela iphinde ibuyisele felefele wonke loo msebenzi kubantu bakowethu abaNtsundu ngeenjongo zokubakha nokubafundisa.
Eli phulo lalijongene nokwakushunyayelwa ngubawo ongasekhoyo uNelson Mandela lokuxolelanisa zonke iintlanga zoMzantsi Afrika. Laphinda lakhuthazwa ngubawo uThabo Mbeki xa wayethetha ngebuyambo yobuAfrika.
Ngenene nenyaniso eli phulo lakuphumeza oko kwashunyayelwa zezi zangxa zeenkokheli. Isihlava kulo msebenzi savuswa yiYunivesithi yaseRhodes eMakhanda eyathi yathenga iincwadi zam ezininzi yaza yaziveza kwi-intanethi.
Ithala leencwadi lakhona bokuba uMpumelelo Makuliwe unemali eninzi ayifumana ngokuthengisa iincwadi. Ndaqala ndanezothe ndasefwa andafunwa kwiintlanganiso neenkomfa ezingoncwadi.
Kwaxokwa kwathiwa ndiphethe umankankela wenkampani eyoyikekayo enkulu. Aqala andibaleka amaziko osasazo.
Nabanye abantu babona ukuba nabo mababalekele kwesi sisele salo vimba wegolide uziziduko. Baqala abanye baya koonomathotholo besiya kuxoxa ngalo mbandela; abanye babhala ezabo iincwadi. Kodwa inja ayavuthwa, azathengwa, abanye boyiswa yimibuzo sele bekoonomathotholo.
Isizathu ke apho sikhoyo luhlobo lwemfundo awafika wafundiswa yona umntu oNtsundu waseMzantsi Afrika ngumLungu oliNgesi. Laa nto yokubhalelwa ii ‘notes” ebhodini, aze umntu akhuphele, emva koko ankqaye, okanye akope kwiphetshana ekuthiwa yigqiza (isikirane). Bona balwa umsebenzi wam kufuneka bekope kwakuwo, baphinde bamonele kwamna.
Inkampani endincedayo yagqiba ekuthini mayandise imiqulu yeencwadi zeziduko ibe mikhulu kakhulu ukuze amasela oyiswe kukuyifunda angakwazi nokuyihlawula. Yaphinda yathi mandingabonakali nakumaphephandaba nakoonomathotholo. Sifuna nje kucace poqo ukuba ngubani kanti owaziyo lo msebenzi weziduko. Yiloo ngxaki ke ngoku ubona abantu bengathi bayabuya nje. Kulele inkomo isengwa.
Elokugqibela, nabani na ofuna ukusebenza nathi ngeenjongo ezintle ingekuko ukunyoluka siyasebenzisana naye.